HLALA EBUHLENI | Yaziwa "Ngeyona ndawo"
Le ndawo iphambi kolwandle ibekwe entliziyweni yedolophu yaseSan Pedro. Umgama nje omgama ukusuka kwiTeksi yaManzi kunye nokuhamba imizuzu esi-8 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Thatha inyathelo elinye ngaphandle komnyango wangaphambili kwaye uve isanti phakathi kweenzwane zakho - akukho zihlangu zifunekayo!
Lala ngesandi solwandle kwaye uvuke ujonge amaza abetha ngokuchasene ne-2nd enkulu yeBarrier Reef emhlabeni. Sebenzisana kwaye Wamkele iNkcubeko abaninzi abayithandayo ngaphandle!
Zilungiselele ukutshonisa iinzwane zakho esantini kwaye uve impepho yeCaribbean kwisikhumba sakho esiqatywe lilanga. unokufikelela ngokuthe ngqo kumanzi aluhlaza okwesibhakabhaka ukusuka ngqo kwipatio yakho. Eli gumbi lihle linegumbi elinye lakhiwe ngamaplanga aseBelize, kubandakanya nefenitshala elungiselelwe wena ngesandla.
Siyilungisile i-condo yethu ukubandakanya ubutofo-tofo bekhaya kunye nobunewunewu okongeziweyo baselwandle ngethemba lokuhlangabezana nolindelo lwakho. Uya kuba nebhedi ekhululekileyo yobukhulu bokumkani, iilinen ezithambileyo, indawo yethu yokuhlala yokuphumla inesofa yokumkanikazi, kunye nayo yonke into onokuyidinga ekhitshini. Sibonelela (30megs) WiFi, Netflix, amanzi ashushu, kunye ne-air conditioning. Ugcino lwendlu olucwangcisiweyo lubonelelwa ngesicelo. Iilinen ezitsha zibonelelwa ngesicelo.
Nokuba uyonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye ukonwabela i-cocktail yangokuhlwa / iglasi yewayini, uya kufuna ukuchitha ixesha kwi-patio ujonge!
4.95 ·Izimvo eziyi-134
4.95 · Izimvo eziyi-134
Uya kurhangqwa zezona ndawo zokutyela ziphezulu kwesi siqithi ukuze ufumane izidlo ezimnandi, iivenkile zokuntywila ezinemisebenzi engapheliyo njengokuhamba nge-snorkeling, ukuntywila, ukukhwela isikhephe, ukuhamba ngenqanawa kubantu abanomdla, kunye nobugcisa bezandla ukuze uthathe uhambo lwakho lokugoduka nawe!
Uya kubona kwaye wenze ubuhlobo kunye neentsapho ezininzi zesizukulwana sesithathu sabahlali besiqithi ngelixa uhamba kwizitrato zeDowntown yakudala yaseSan Pedro!
Nangona sobabini sinemisebenzi yexesha elizeleyo, siyafumaneka ukuze siphendule yonke imibuzo onayo ngexesha lokuhlala kwakho! Sifuna ukuqiniseka ukuba ukuhlala kwakho kukhululekile kangangoko kunokwenzeka!
Zive ukhululekile ukusibuza nayiphi na imibuzo onokuba unayo, sithanda ukwabelana kangangoko sinako malunga nedolophu yethu encinci iSan Pedro.
Siyafumaneka ngo-Airbnb nakuWhatsapp. Singabalandeli be-Instagram ngokunjalo @bytheseabelize;)
Nangona sobabini sinemisebenzi yexesha elizeleyo, siyafumaneka ukuze siphendule yonke imibuzo onayo ngexesha lokuhlala kwakho! Sifuna ukuqiniseka ukuba ukuhlala kwakho kukhululekil…